Uncategorized | Banda Post
မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အကြံပြုချက်များ ပါဝင်သော Business Agenda 2022
Business Agenda (စီးပွားရေးအစီအစဉ်) ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာ စာတမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပြီး အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များကို အစိုးရဌာနများ၊ မူဝါဒရေးဆွဲသူများထံ တင်ပြသည့် အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။ယင်း Business Agenda တွင်
ဆောင်းရာသီပြောင်းသီးနှံတွင် ငမြှောင်တောင်ဖျက်ပိုး FallArmyworn(FAW) ကျရောက်မှုရှိလာရင် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ဦးမှာလား
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ဆောင်းရာသီပြောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာ ငမြှောင်တောင်ဖျက်ပိုး FallArmyworn(FAW) ကျရောက်လာလို့ ဒေသခံတွေရဲ့ စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ပြောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအနေနဲ့ • အစေ့ထုတ်ပြောင်း ၅၆၄၅၉ ဧက • ဖူးစားပြောင်း ၁၀ဝ၃၀ဝ ဧက စုစုပေါင်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ အခြေခံပညာကဏ္ဍအတွက် ရန်ပုံငွေရရှိမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဘာသတင်းတွေ လုပ်လို့ရမလဲ (Story Tips)
Tags: Ayeyarwaddy, story tips
၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ အခြေခံပညာကဏ္ဍ အတွက် နှစ်အလိုက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေရရှိမှုအခြေအနေ ၂။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်အလိုက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကို ခွဲဝေရရှိတဲ့ ရန်ပုံငွေအခြေအနေ ၃။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲက တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ ကျောင်းအဆောက်အဦးလိုအပ်ချက်အခြေအနေ ၄။ ကျောင်းအဆောက်အဦးလိုအပ်ချက် ကို နှစ်အလိုက်
INGO/NGO များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လစာဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်
INGO/NGO များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လစာဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ် ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အခွင့်အရေးများနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပဒေ အရ လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဗီယင်နာ ကွန်ဗင်းရှင်း သဘောတူစာချုပ်အရလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၃
အာရှဖောင်ဒေးရှင်းက ၂၀၁၈ ခုနှစ် မြို့ပြဘဝလူမှုစစ်တမ်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ပါခ်ရွိုင်ရယ် ဟိုတယ်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စစ်တမ်းပါ။ ဒီစစ်တမ်းရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ မြို့ပြနေလူထုအနေနဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦကောင်းမွန်လာတဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူထုက စိုးရိမ်မှုရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျဆင်းလာခဲ့တဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ်နူန်းထားနဲ စံချိန်တင် မြင့်တက်ဆဲ့ ရွှေဈေးကွက် အခြေအနေများ
၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျပ်ငွေ လဲလှယ်တဲ့ နှုန်းထား တန်ဖိုးဟာ ပြန်လည် မာလာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းထားအရ မြန်မာငွေတန်ဖိုး ပြန်လည် မြင့်တက်လာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး
ပြည်တွင်းဘဏ်များသို့ နိုင်ငံခြားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုခြင်း
ပြည်တွင်းဘဏ်များအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်ခံလိုလျှင် ဗဟိုဘဏ်ကို အကြောင်းအကြားဖို့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဘဏ်များအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားဘဏ်များ၊ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကျိုးတူရင်းနှီမြှုပ်နှံမှု ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရယူနိုင်ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်စာတမ်းများကို ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ပြရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ
ချောက်လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ဝ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
(DVB) မကွေးတိုင်း၊ ချောက်မြို့နယ်ရှိ ဆင်က လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ စွယ်ပေါက်ကံ လေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက် Infa Captial Myanmar-ReEx(ICM) ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ဝ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ICM ကုမ္ပဏီ စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ ဦးမင်းမင်းဆွေက
ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ဒုဥက္ကဌနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်းနဲ့ ဦးဘိုုဘိုုငယ်တိုု့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အနှစ်ချုပ်
၁။ မြန်မာပုုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေက ခုထိယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးလို့ ပြည်ပဘဏ်တွေ ပေးမဝင်ပါနဲ့ဆိုတာ ဆီလျော်တဲ့ အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။ . ၂။ ဈေးကွက်ဆိုတာ အကန့်အသတ်နဲ့ထားရတဲ့အရာမဟုတ်သင့်ဘူး။ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ ပြည်ပလုပ်ငန်းတွေပဲ ငွေချေးရမယ်ဆိုတာ မီတာငါးဆယ်အပြေးပွဲမှာ နုိုင်ငံခြားသားတွေပြိုင်၊ မီတာတစ်ရာမှာ မြန်မာတွေပြိုင်ဆိုုသလိုုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ . ၃။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် တန် ၄၀၀ဝ ဘိလပ်မြေ စက်ရုုံ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းမည်
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် တန် ၄၀၀ဝ ဘိလပ်မြေ စက်ရုုံ အား ယခုု နှစ် မှ စတင်ပြီး ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်ြဖင့် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုုသိုု့ ပြင်ဆင်ရန် ကျောက်မီးေသွး သယ်ယူခြင်းတွင်သော်လည်းကောင်း ၊ စမ်းသပ်လည်ပတ်မှုု များတွင် သော်လည်းကောင်း ဒေသခြံပည်သူများနှင့် လုုံးဝ ပွင့်လင်းစွာသဘောထားရယူခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ အလားတူ ဒေသခံများ သည့် ယခုု